बढ्दैछ संक्रमण, बाँकेमा थप ४७ जनामा संक्रमण - Pradesh Today
Homebreaking-newsबढ्दैछ संक्रमण, बाँकेमा थप ४७ जनामा संक्रमण
बाँके, ६ जेठ । बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रमा थप ४७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएको छ । यो सँगै बाँकेमा संक्रमित हुनेको संख्या ८१ पुगेको छ । बाँके प्रदेश ५ को कोरोना ‘हटस्पट’ बनेको छ ।
नरैनापुर क्षेत्रका २ सय ७३ को स्वाव संकलन गरी भेरी अस्पतालमा ल्याइएको थियो । जसमध्ये १ सय ९२ को परिक्षण गर्दा ४६ पुरूष र एक महिलामा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकेको नरैनापुर कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनेको छ । बाँकी ८१ जनाको स्वाव परिक्षण प्रक्रियामा रहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोनाबाट निधन भएको युवकको सम्पर्कमा आएका र थप अन्य कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको स्वाव संकलन गरी परिक्षण भएको थियो ।
एक व्यक्तिको निधनसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा नरैनापुरलाई ‘हटस्पट’ घोषित गरी थप सतर्कता अननाउन स्थानीयहरूले माग गर्न थालेका छन् ।
यसअघि नरैनापुरका ८ जना कोरोना संक्रमितहरूलाई शुक्रबार दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमामा ल्याएर उपचारमा राखिएको छ ।
सदरमुकाम नेपालगञ्जदेखि करिब ३५ किलोमिटर दक्षिण पूर्वराप्तीपारी अवस्थित नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं ५ मटेहियास्थित नयाँबस्तीका २५ वर्षीय युवाको आइतबार बिहान निधन भएको थियो ।
भारतको मुम्बईबाट गत बैशाख ३० गते बाँके आएलगत्तै सो गाउँपालिका वडा नं ५ मटेहियाको भगवानपुरस्थित दीपेन्द्र प्राविमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका युवाको आइतबार बिहान दुई पटक बान्ता गरेको केही समयपछि मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
मृतक युवासहित भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्दा यसअघि यहाँका ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
ती मध्ये तीनजना दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयकै क्वारेन्टाइनमा थिए । उक्त क्वारेन्टाइनमा अहिले ३८ जनालाई राखिएको छ ।
पहाडी जिल्लामा पनि संक्रमण
प्रदेश नम्बर ५ मा एकैदिन ४९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पहिलो पटक प्रदेशको पहाडि जिल्ला गुल्मीमा समेत कोरोना देखिएको छ । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका १ का ४१ वर्षीय पुरूषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि बुटवलमा उपचारका लागि आएका उनमा संक्रमण देखिएको हो । उनको भैरहवाको प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको हो ।
प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीका अनुसार उनको स्वाव तीन दिनअघि संकलन गरिएको थियो । जेठ १ गते बुटवलमा उपचारका लागि आएका थिए । उनमा कसरी कोरोना स¥यो भन्ने अझै खुलिसकेको छैन् ?
दाङका थप एकजनामा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ । धुलिखेलमा रहेका दाङका एकजनाको धुलिखेलमा भएको परिक्षणमा संक्रमण देखिएको हो । यो सँगै दाङका संक्रमितको संख्या ४ पुगेको छ ।
२० गतेसम्म कपिलवस्तु सिल
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै कपिलवस्तु जिल्लालाई जेठ २० गतेसम्म पूर्णरूपमा सिल गरिने भएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समय जेठ २० गते राति १२ बजेसम्म जिल्ला सिल गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
यस अवधिमा अति आवश्यकीय सवारी साधनबाहेक सबै सवारी साधनलाई पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनलाई भने जिल्लामा रोकेर कसैलाई चढाउन र झार्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अति आवश्यकीय सामग्री, खाद्यान्न र औषधि खरिदका लागि प्रत्येक सोमबार, बुधबार र शनिबार बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म समय मिलाइएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ सय ५७ पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा बाँके नरैनापुरका ४६ जना पुरूष र १ जना महिला कोरोना संक्रमित फेला परेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरको प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका एकजना पुरूषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको हो । भैरहवाको प्रयोगशालमा गुल्मीका एक पुरूष, धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका एकजना, रौतहटका एकजना,
दाङका एकजना र धादिङका एकजनामा पुरूषमा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । हालसम्म ३० हजार ७ सय २३ वटा नमूना पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म दाङमा ५ सय ८१ जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हालसम्म ५ सय ८१ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको जानकारी दिएको हो ।
दाङमा ५८७ को परिक्षण
दाङमा ५ सय ८७ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ । ६ जनाको परीक्षण प्रक्रियामा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बताएको छ ।
परीक्षण गरिएकामध्ये दुईजनाको पोजेटिभ र बाँकीको नेगेटिभ देखिएको छ । पछिल्लो पटक घोराही, तुलसीपुर, रक्षाचौर र सल्यान क्षेत्रबाट लिइएको स्वाव नमूनामध्ये ३२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
दाङमा सोमबारसम्म ३ सय ९१ वेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । जसमा १ सय ५१ जनालाई राखिएको छ । त्यस्तै १ सय ६६ वटा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको छ, जहाँ सोमबारसम्म १६ जनालाई भर्ना गरिएको छ ।
कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी दाङमा १६ जना कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गरिएको छ । उक्त अस्पतालमा २ जना चिकित्सक र १० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।
अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरूले प्रयोग गरेका वस्तु र खाना खादा प्रयोग गरेको वस्तुलाई बिर्सजन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले कोरोना संक्रमितहरूले खाएका भाडा तथा बिरामीहरूले खाएर बचेको खाना खाडलमा पुर्ने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अबको छाडा चौपाया अस्पतालको हाताभित्र जानबाट रोक्नका लागि तारजालीले बेर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बंगलाचुलीमा आठै वडामा क्वारेन्टाइन
बंगलाचुली गाउँपालिकाको नागरिक सुरक्षाको लागि आठवटै वडाहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण भइरहेको छ । नागरिकहरू भारतबाट आउने क्रम जारी रहेको अवस्थामा सीमानाकाबाट ल्याइएका उनीहरूलाई ती क्वारेन्टाइनमा राखिने छ ।
भारतबाट आउने दाङको कोइलाबास र कृष्णनगर नाका भएर आउन उक्त गाँउपालिकाले अनुरोध गरेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई सम्बन्धित वडासम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उनीहरूलाई सीधै सम्बन्धित वडाको क्वारेन्टाइनमा पु¥याइनेछ, भने अनिवार्य पीसीआर जाँच हुनेछ । सुरक्षित ढंगले यात्रा गर्न र होसियारी अपनाउन बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर वलीले अनुरोध गरेका छन् ।